Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » United Airlines: eny an-dalana hahatratra ny tanjona kendrena 2022
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny CEO CEO United Airlines, Scott Kirby
Raha mitanisa ny fihemorana amin'ny fitsangatsanganana premium, fanokafana indray ny sisin-tany eoropeana amin'ny volana ho avy, ny fitohizan'ny fitohizan'ny dia amin'ny raharaham-barotra sy ny famantarana mialoha ny famahana ny fameperana ny fivezivezena amin'ny tsena Pasifika lehibe, dia nanambara ihany koa i United fa hampitombo ny fahafaha-manao iraisam-pirenena 10% amin'ny 2022 - ary mitazona hatrany fahafaha-miasa an-trano hatramin'ny taona 2019.
2.2 miliara dolara eo ho eo amin'ny fampihenana ny vidin'ny rafitra sy ny fiverenan'ny fiaramanidina miverina amin'ny serivisy no hampiroborobo ny fahombiazan'ny CASM-ex matanjaka amin'ny 2022 sy ny sisa.
Ny fiverenan'ireo mpandeha raharaham-barotra sy ny fanokafana indray ny sisintanin'i Eropa dia fotoana mety ahazoana tombony i United.
Ny fanatsarana sy ny fahamendrehana mitohy dia mitarika amin'ny firaketana ny Score Promoter Net rehetra hatramin'ny taona; fiakarana efa ho 12%.
United Airlines (UAL) androany dia nanambara ny valim-bola fahatelo tamin'ny telovolana fahatelo. Na eo aza ny fiantraikan'ny variana COVID-2021 Delta amin'ny telovolana fahatelo, dia mijanona am-pahatokisana hatrany ny orinasa hahatratra ny tanjona kendrena maharitra ara-bola napetraka ho anisan'ny drafitra United Next tamin'ny fiandohan'ity fahavaratra ity ary hampihena ny CASM-ex eto ambany Ambaratonga 19 amin'ny taona ho avy.
Raha mitanisa ny fihemorana amin'ny fitsangatsanganana premium, fanokafana indray ny sisin-tany eoropeana amin'ny volana ho avy, ny fitohizan'ny fitohizan'ny dia amin'ny raharaham-barotra sy ny famantarana mialoha ny famahana ny fameperana ny fivezivezena amin'ny tsena Pasifika lehibe, dia nanambara ihany koa i United fa hampitombo ny fahafaha-manao iraisam-pirenena 10% amin'ny 2022 - ary mitazona hatrany ny fahafaha-miasa an-trano hatramin'ny taona 2019. Ny drafitra dia hampiasa vola amin'ny fanatsarana ny sisin-tany iraisampirenena sy ny ivon-toeran'ny amoron-tsiraka any Etazonia izay nampahomby ny fahombiazan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka tamin'ny fandefasana lalana vaovao mankany Afrika sy India. Ny sidina andrasana amin'ny ambaratonga any Eropa, Amerika Latina, India, Afrika ary Moyen Orient amin'ny fahavaratra 2022, dia hahazo ny fiverenan'ny Boeing 777 an'ny United's Pratt & Whitney ho any an-tsambo amin'ny 2022, izay - raha ampiarahina sahady. nanambara teo amin'ny $ 2.2 miliara ny fihenan'ny vidim-bidy sy ny fitomboan'ny refy natao - hamela an'i United hitazona ny CASM-ex raha mitohy amin'ny lalan'ny fanarenana.
"Ny fanarenana dia nahemotry ny Delta variant, fa ny United Airlines Ny ekipa dia mifantoka hatrany amin'ny fahitana lavitra antsika - ary tsy hivily lalana amin'ny volatility akaiky eo ho eo - midika izany fa eo an-dàlam-pandrosoana izahay hahatratrarana ireo tanjona napetrakay ho an'ny 2022, "hoy izy Ny CEO CEO United Airlines, Scott Kirby. “Hatramin'ny fiverenan'ny dia amin'ny raharaham-barotra sy ny fanokafana ny famerenana an'i Eoropa ary ny famantarana mialoha ny fisokafan'ny Pasifika dia nivadika ho rambondanitra ireo rivotra nifanatrika taminay ary mino izahay fa i United dia manana toerana tsara kokoa hitarika ny fanarenana noho ny orinasam-piaramanidina rehetra. eto amin'izao tontolo izao. Ny fanarenana anay dia tohanan'ny fampiasam-bola amin'ny haitao sy ny fahombiazana hafa izay hanome ny mpiasa fitaovana ilain'izy ireo hikarakarana tsara ny mpanjifanay - ary hitazona ny vidiny ho voafehy. Feno fankasitrahana ireo mpikambana ao amin'ny ekipanay Tafaray aho noho ny fahavononany hatrany amin'ny mpanjifanay, satria tena ilaina amin'ny fahafahanay miatrika ny areti-mandringana, ary hiteraka ny fahombiazantsika amin'ny taona ho avy io. ”
75% ny St Kitts sy Nevis lasibatra vaksiny ny mponina
Fifaninanana varotra amin'ny toerana virtoaly: Oniversite...
Nisokatra indray i Aostralia ho an'ny faritra atsimo vita vaksiny tanteraka...
Krizy fizahan-tany sy fanarenana ny toerana haleha: Vaovao tsy maintsy...
Jamaika dia nametraka fameperana vaovao ho an'ny Afrikana...
Valin'i Afrika Atsimo tamin'ny Diabe vaovao napetraka...
Miresaka momba ny maha-zava-dehibe amin'ny tontolo vaovaon'ny dia